International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: BURMA NEWS INTERNATIONAL:: 30 July 2008
BURMA NEWS INTERNATIONAL:: 30 July 2008
Junta bribed to release prisoners in Kachin State
The Burmese military junta officials in Kachin State in northern are accepting bribes to release prisoners. Criminals sentenced to jail can bribe the authorities to be freed. But it costsalot of money,asource said.
Primary school headmistress collects admission fee forcibly
Maungdaw, Arakan: The headmistress of the State Primary School in Myoma Kayandan (Seikda para) village, Maungdaw Township, collected admission fees forcibly from students in June 2008, saidafather of three children of the school.
Relief comes to Shan State
The Free Burma Rangers (FBR) relief teams providedasmall glimpse into the lives of the people during its mission to Shan State in June and July, according to FBR report on July 23.
SSA-North denies BBC story
The report filed by BBC on July 29 that the ceasefire Shan State Army (SSA) "North" had decided to contest the 2010 general elections was hotly repudiated byatop officer close to the group's chief of staff.
Stop insuring "Burmese repression", report says
New Delhi — Sixteen of the world's largest insurance companies have been urged to stop trading in Burma , whose military rulers are infamous for their appalling human rights violation,anew report on Tuesday said.
New Delhi — The United Nations' Humanitarian Chief John Holmes on Monday admitted that about US $ 10 million of the funds provided by donors to help Burmese cyclone victims could have been lost due to the distorted money exchange mechanism followed by the military regime.
Burmese exiles' leading media websites under attack 30 July 2008
Two leading news organizations of Burmese exiles reported persistent and severe attacks on their respective online servers this past week.
ကေအဲန်ယူနှင့် ဒီကေဘီအေအကြား တင်းမာမှုဖြစ်၊ ရွာသား ၂၀၀ ကျော် နယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေး
Written by ခွန်အောင်မြတ်။
Wednesday, 30 July 2008 14:24
ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ကြမည့် အခြေအနေကြောင့် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှ ကရင်ကျေးရွာသား ၂၀၀ ကျော် နေအိမ်၊ ခြံယာများကို စွန့်၍ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် နေကြရသည်။
ရန်ကုန် အဝေးပြေး ယာဉ်စီးခများကို မထသ က တရားဝင် တိုးမြှင့်
Wednesday, 30 July 2008 09:34
နယူးဒေလီ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်းမှ နိုင်ငံတဝှမ်းသို့ ပြေးဆွဲသော အဝေးပြေး ယာဉ်စီးခ နှုန်းထားများကို မော်တော်ယာဉ် လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ (မထသ) က ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ တရားဝင် တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်သည်။
စစ်ဖြစ်မည်စိုးသဖြင့် ကရင်ကျေးရွာသား ၂ဝဝ ခန့် နေရပ်စွန့်ခွါ
Written by သန်းထိုက်ဦး
Wednesday, 30 July 2008 09:32
ချင်းမိုင်။ ။ ကရင်လက်နက်ကိုင် တပ်များအကြား တိုက်ပွဲဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဒေသအချို့မှ ကျေးရွာသား ၂ဝဝ ခန့်သည် ယခုလဆန်းပိုင်းက ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးလာကြသည်။